वर्षौंदेखि एउटा योग केन्द्रमा मौलाइरहेको ‘यौन-भोक’ – Health Post Nepal
२०७८ असार १९ गते १४:३९
म दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो योगशालाहरूमध्ये एक ‘शिवानन्द’ सँग एक योग शिक्षिकाको रूपमा एक जोडिएको थिएँ। म त्यहाँ त्यो दिनसम्म रहेँ, जुनदिनसम्म म सामाजिक सञ्जालको एउटा पोस्टले निकै हैरान भइसकेको थिइनँ।
सामाजिक सञ्जालको त्यो पोस्टले संस्थामा दशकौंदेखि जारी यौन शोषणका कैयौं आरोपलाई सबैसामु बाहिर ल्याइदिएको थियो।
जतिबेला म आफ्नो उमेरको दोस्रो दशकको बीचमा थिएँ, मेरो परिचय योगसँग भयो। र, योग मेरो जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्यो।
कैयौं योग समर्पित योगीजस्तै, मेरो लागि यो एक व्यायाममात्र थिएन। बरू जीवन जिउने एक तरिका थियो। मैले आफ्नो स्थानीय शिवानन्द सेन्टरमा योगमात्र सिकाइनँ, मैले आफ्नै इच्छाले त्यहाँ खाना पकाएँ र सर–सफाई जस्ता काम पनि गरेँ। शिवानन्दको शिक्षाले मेरो अस्तित्वको हरेक पाटोलाई प्रभावित गर्‌यो।
तर, २०१९ को डिसेम्बर महिनामा, मेरो फोनमा एक नोटिफिकेसन आयो। त्यो पोस्ट मेरो शिवानन्द फेसबुक ग्रुपका संस्थापक स्वर्गीय स्वामी विष्णुदेवानन्दबारे थियो।
जुली साल्टर नाम गरेकी एक महिलाले आफ्नो पोस्टमा लेखेकी थिइन्– विष्णुदेवानन्दले क्यानडास्थित शिवानन्द मुख्यालयमा तीन वर्षसम्म उनको यौन शोषण गरेका थिए।
दशकौंपछि हिम्मत जुटाएर उनले शिवानन्द प्रवन्ध बोर्डलाई यसबारे उनले बताएकी थिइन्। तर, उनीहरूको ‘प्रतिक्रिया मौनबाट सुरू भएर मौन राख्ने प्रयाससम्ममात्रै रह्यो।’
मैले अहिलेसम्म ती १४ महिलाहरूसँग साक्षात्कार गरेको छुँ, जसले वरिष्ठ शिवानन्द गुरूमाथि दुव्र्यवहारको आरोप लगाएकी छिन्।
तीमध्ये कतिपय महिलाले यसबारे आफ्ना परिवार र यहाँसम्म कि आफ्ना साथीहरूलाई पनि बताएकी छैनन्। मात्रै एकजनाले यसबारे सार्वजनिक गरेकी छिन्।
मैले एक पूर्वकर्मचारीसँग कुरा गरेँ, तर उनको भनाइअनुसार शिवानन्द बोर्डले यसबारे चासो देखाएन।
मेरो यो खोजतलासले यो संगठनभित्र सत्ता र अधिकार दुरुपयोगको दाबीलाई उजागर गरेको छ जसलाई कुनै समय म आफ्नो एकदम नजिक ठानेको भएकी थिएँ।
केहो शिवानन्द योग?
– शिवानन्द सास्त्रीय योगको एक रूप हो जसले शारीरिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्य दुबैमाथि जोड दिन्छ।
– स्वामी विष्णुदेवानन्दले १९५९ मा क्यानाडास्थित मन्ट्रियलमा यसको स्थापना गरेका थिए र आफ्ना गुरु स्वामी शिवानन्दको नाममा नामकरण गरे।
– विश्वका ३५ देशमा करिब ६० शिवानन्द आश्रम र केन्द्र स्थापना भएको छ र प्रशिक्षित शिवानन्द शिक्षकको संख्या लगभग ५० हजार छ।
मलाई आज पनि राम्ररी सम्झना छ, भारतको केरलस्थित शिवानन्द आश्रममा मेरो पहिलो दिन, जहाँ मैले २०१४ मा एक योग शिक्षिकाको रूपमा प्रशिक्षण लिएको थिएँ।
पर्खालमा शिवानन्दका संस्थापक स्वर्गीय स्वामी विष्णुदेवानन्दको एक सुन्दर तस्बिर सजिएको थियो।
ती उनै व्यक्ति थिए, जसको पर्दाफास जुलीले गरेकी थिइन्।
उनको प्रभावशाली शिक्षाका कारण कतिपय योगीहरूले पनि सम्पूर्ण सांसारिक बेडीलाई त्यागेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन संगठनलाई समर्पित गरिदिएँ।
म बुझ्नसक्छु किन? त्यतिबेलामा जीवनको निकै चुनौतीपूर्ण क्षणबाट गुज्रिहरेको थिएँ। र, शिवानन्दमा मलाई एकखाले शान्ति प्राप्त भयो। आसन या भनौं मुद्राहरूले मलाई शारीरिक शक्ति दिएको थियो र शिवानन्दको कर्म, सकारात्मक सोंच र ध्यानका सिद्धान्तले मेरो आत्मालाई तृप्त गर्‌यो।
२०१५ मा लन्डनमा बस्ने एक व्यक्तिसँग मैले विवाह गरेँ। उनीसँग लन्डनमा बस्न मलाई एखखाले डर लागेको थियो। तर, लन्डनस्थित घरबाट पुटनेको शिवानन्द सेन्टर नजिकै रहेको जानकारी पाएपछि मेरो त्यो डर हराएर गयो।
मेरा पति प्रायः मजाक गर्थे– मेरो पहिलो प्रेम शिवानन्द योग सेन्टर हो कि उनी? भनेर।
जुली साल्टरको फेसबुक पोस्टको दुई महिनापछि, शिवानन्द बोर्डका दुई सदस्य युरोपबाट पुटनेमा काम गर्ने कर्मचारीसँग कुरा गर्न आए।
त्यतिबेला मलाई आशा थियो कि मेरो दिमागमा घुमिरहेका सबै प्रश्नहरू मध्ये केहीको जवाफ पक्कै पनि आउँछ भनेर। तर, उनीहरूको जवाफ अस्पष्ट थियो। र, उनीहरू सवाल–जवाफका क्रममा बचाउको मुद्रामा देखिए।
मलाई थाहा थियो यसबारे जुलीसँग मैलै स्वयं कुरा गर्नुपर्छ भनेर।
जतिबेला शिवानन्दको शिक्षाबारे जानकारी भएको थियो मूल रूपले न्युजिल्यान्ड बस्ने जुली त्यतिबेला केवल २० वर्षकी थिइन् र इजरायल पुगेकी थिइन्। त्यसपछि उनी तत्काल यस जीवनयात्रामा सामेल भइन् र १९७८ मा क्यानाडास्थित शिवानन्द मुख्यालय पुगिन्।
विष्णुदेवानन्द त्यहीँँ बस्थे। र, जुलीलाई उनको निजी सहायक बन्न भनियो। सुरूमा जुलीले त्यसलाई एक विशेषाधिकार ठानिन्।
तर उनी भन्छिन् उनको दिनचर्या ज्यादै कठिन थियो। जुली बिहान ५ बजेदेखि लगभग आधा रातसम्म, सप्ताहको सातै दिन–बिना पारिश्रमिक काम गरिररहिन्।
जुली भन्छिन् स्वामी विष्णुदेवानन्दको स्वभावबारे अनुमान लगाउन ज्यादै कठिन भइसकेको थियो। उनी प्रायः जुलीमाथि रिस गरेर कराउने गरेका थिए।
जुलीले मलाई भनिन्, ‘निश्चित रूपले, मेरो सीमा टुट्दै गइरहेको थियो।’
त्यसपछि घटनाहरूले निराशाजनक मोड लियो।
एकदिन जब जुली विष्णुदेवानन्दको घरमा काम गरिरहेकी थिइन्, विष्णुदेवानन्द सुतेर भक्ति संगीत सुनिरहेका थिए। विष्णुदेवानन्दले जुलीलाई आफ्नो छेउमा सुत्न भने। मैले केही बुझ्न सकिनँ भनेर जुलीले सोधेपछि विष्णुदेवानन्दले भने, ‘यो तन्त्र योग हो। एक त्यस्तो योगाभ्यास जो अध्यात्मिक सेक्ससँग जुडेको छ। यसको सिधा अर्थ गहन विश्रामको माध्यमबाट अध्यात्मिक ज्ञानतर्फ बढ्नु हो।’
जुली भन्छिन्, ‘विष्णुदेवानन्दले प्रवचनको बेला केवल सैद्धान्तिक रूपमा यसबारे भनेका थिए।’
जुलिले भनिन् ‘मैले केही बुझ्न सकिनँ’, तर शरीर र दिमागले ‘नाइँ’ भने पनि म त्यहाँ सुतेँ। र, फेरि यौन सम्पर्क भयो। त्यसपछि म तल काम गरिरहेको थिएँ। म ज्यादै लज्जित थिएँ, साथै पीडा, आत्मग्लानी र अपराधबोध पनि भइरहेको थियो।’
जुलीका अनुसार उनीसँग तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म विभिन्नखाले सेक्स गतिविधि गरियो।
गुरु–शिष्यबीचका सम्बन्ध योगमा गुरु–शिष्य परम्पराको रूपमा रहन्छ।
यो एकखाले गौण सम्झौता हो जसको अर्थ अनुयायी गुरुको इच्छाप्रति समर्पित रहन्छन्।
विष्णेदेवानन्दले जुलीसँग जे गरे, त्यसलाई अब उनी ‘बलात्कार’ ठान्छिन्। किनभने विष्णुदेवानन्दको सत्ता र आभासामु उनको सहमति र असहमति बेइमानी थियो।
‘म ज्यादै अलग–थलग थिएँ, आफ्नो परिवारबाट टाढा दुनियाँको अर्को छेउमा बसिरहेको थिएँ। आर्थिक रूपले म संगठनमाथि निर्भर थिएँ।’
अरु महिला पनि बाहिर आए
त्यसपछि मैले अरु दुईजना त्यस्ता महिलासँग कुरा गरेँ, जसले जुलीको फेसबुक पोस्टमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका थिए।
विष्णुदेवानन्दले उनीहरूको पनि शोषणा गरेको उनीहरूले आरोप लगाएकी थिइन्।
पामेलाले मलाई भनिन्– विष्णुदेवानन्दले १९७८ मा लन्डनको विन्डसर कैसलमा एक रिट्रिटको बेला बलात्कार गरेका थिए।
उनी त्यतिबेला विश्रामको गम्भीर अवस्थामा थिइन्, योगमा यसलाई ‘शवासन’ भनिन्छ।
ल्युसिल भन्छिन् ‘विष्णुदेवानन्दले ७० को दशकको मध्यामा क्यानाडाको आश्रममा तीनपटक उनको बलात्कार गरेको थियो। पहिलो दुईपटक तन्त्र योगको नाममा मैले बुझेँ। तर, तेस्रोपटक जब उनले पैसा दिए ‘वेश्याजस्तै’ महसुस भयो।
विष्णुदेवानन्दको मृत्यु १९९३ मा भयो, तर जुलीलाई संगठन छोड्ने हिम्मत जुटाउन थप ६ वर्ष लाग्यो।
आफूसँग भएको घटना सबैसामू राखेर अन्य मानिसलाई पीडाबाट जोगाउने उनको एकमात्र चाहना छ।
विष्णुदेवानन्दको मृत्यु भइसके पनि शिवानन्दका भक्तसँग भइरहेको शोषण सकिएको छै भन्ने उनको बुझाइ छ।
जुलीको फेसबुक पोस्टले त्यहाँ हुने त्यस्ता यौन गतिविधिको एउटा पोका खोलिदिएको थियो।
अरु ११ महिलाले सुनाएको शाेषणकाे कथा
मैले थप ११ महिलासँग कुरा गरेँ। उनीहरुले शिवानन्दका अन्य दुई शिक्षकमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। त्यसमध्ये एकजना अहिले पनि संगठनमा सक्रिय छन्।
तिनीहरूमध्ये एउटा दिमागै खलबल्याउने आरोप मैरी (परिवर्तित नाम) ले लगाइन्।
मैरीका अनुसार एक शिक्षकले उनलाई कैयौं वर्षसम्म शोषण गरे।
ती व्यक्तिको नाम कानुनी कारणले उल्लेख गर्न सकिँदैन। मैरी भन्छिन्–हाम्रो यौनसम्बन्ध भइसकेपछि म त्यहाँबाट निस्किएँ। त्योबाहेक अरू कुनै उपाय थिएन।’
एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म दुई जनाबीच कुनैसम्बन्ध थिएन। तर, मैरीलाई सम्झना छ कि एकपटक त्यो व्यक्ति चुपचाप उनको कोठामा पुग्यो, सेक्स गरेर केही नबोली त्यहाँबाट गयो।
पाँच अन्य महिलाहरुले पनि मलाई भनेका छन्, त्यो व्यक्तिले उनीहरूसँग पनि शोषण गरेका थिए। ती महिलाहरू एकअर्कालाई चिन्दैनन् तर सबैको पीडा उस्तै छ।
१७ वर्षमै यौन शोषण
क्याथरिन (परिवर्तित नाम) ८० को दशकमा क्यानाडाको शिवानन्दमा बच्चाहरूको शिविरमा भाग लिइरहेकी थिइन्। उनी १२ वर्षको छँदा एक शिक्षकले उनलाई अलि बढि चासो दिन थाले। कैथरिनलाई सम्झना छ त्यो व्यक्तिले उनको शरीर मुसाथ्र्याे अनि उनको पिठ्यूँँमा हात रगड्थ्यो।
जतिबेला उनी १५ वर्षकी भइन् त्यसपछि उनलाई त्यो छुवाइ अझ बढी महसुस हुन थाल्यो।
उनी १७ वर्षकी थिइन्। उनी आराम गरिरहेका बेला त्यही मानिस(शिक्षक) आएर उनलाई जर्वजस्ती ग¥यो। त्यो घटनापछि उनले आश्रम छोडिदिइन्।
अर्की एक महिला भन्छिन्–पछिल्लो समय २०१९ मा त्यो व्यक्तिले उनको पनि यौन शोषण गरेको थियो।
हामीले त्यो व्यक्तिसँग सम्पर्क ग¥यौं र जवाफ दिने मौका दियौं। तर, उसले हाम्रो आरोपको कुनै जवाफ दिएन। त्यो व्यक्ति अहिले पनि शिवानन्दमा सक्रिय छ। यद्यपि संगठन यी अरोपहरूलाई अस्वीकार गर्छ।
एक अरू शिक्षक छन् जसमाथि शोषणको आरोप लागेको छ, उनको वास्तविक नाम मौरिजियो फिनोची हो। उनलाई स्वामी महादेवानन्द भनिन्छ। मैले आठ महिलासँग कुरा गरेको छु जसले उनीमाथि आरोप लगाएका छन्।
ती मध्ये एक हुन् वेन्डी। २००६ मा वेन्डी क्यानाडा मुख्यालयमा महादेवानन्दकी निजी सहायिका थिइन्।
उनको काम इमेल प्रिन्ट गरेर क्याबिनसम्म पु¥याउनुपर्ने थियो। एक दिन, महादेवानन्द इमेल र खाजा लिएर बेन्डीलाई आफ्नो बेडरूममा बोलाए। उनी ओछ्यामा सुतिरहेका थिए।
वेन्डी भन्छिन् खाजाको ट्रे दिएसँगै, महादेवानन्दले उनको बाहुला समाए। त्यसपछि उनले आफूले ओढिरहेको सल हटाए। त्यहाँ उनले हस्तमैथुन गरिरहेका थिए। महादेवानन्दले उनको हातमाथि विर्यस्खलन गरिदिउ।
र, मैले महसुस गरेँ ….कि म उनका लागि मानिस नै थिइनँ।
र, त्यही घटना शिवानन्दसँग मेरो सम्बन्ध अन्त्यको सुरूवात थियो।
बिबिसीबाट अनुवाद गरिएकाे